Lixabiso Sheet metal iindawo bexhentsa mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Izinto ngokubanzi zokwenza iphepha ngetsimbi zezi: intsimbi kwalenza, intsimbi engatyiwa, inkcenkce, intsimbi yasentwasahlobo, ubhedu nobhedu ingxubevange, ingxubevange wemagniziyam, aluminiyamu ingxubevange ipleyiti abandayo liqengqiwe, eshushu liqengqiwe ipleyiti, ipleyiti kwalenza, ipleyiti electrolytic, ipleyiti aluminiyam, intsimbi engatyiwa, ipleyiti yobhedu.
Inkqubo yokuchithwa kwesinyithi esisinyithiweyo
Ngokubanzi, izixhobo ezisisiseko zibandakanya ucheba umatshini, Ukubetha umatshini we-CNC / iLaser, iPlasma, uMatshini wokusika weWaterjet, umatshini wokugoba, kunye nezixhobo ezincedisayo ezinje ngala: Umatshini wokuCoca, umatshini wokulinganisa, umatshini wokutsala, umatshini wokudibanisa amabala, njl. izixhobo kunye neseti epheleleyo yemigca yokuvelisa. Ukubonelela ngeenkonzo ezilungiselelwe wena.
Izinto eziluncedo zeOuzhan sheet metal bexhentsa iindawo
Indlela yokunyathela inokufumana imisebenzi kunye neemilo ezinzima kwaye kunzima ukuyenza ngezinye iinkqubo, ezinje ngamacandelo egobolondo ebhityileyo. Ukuchaneka kokujongwa kwamalungu okunyathela okubandayo kuqinisekisiwe ngumngundo, ke uzinzo oluhle lulungile kwaye ukungatshintshana kulungile.
-Isantya sokusetyenziswa kwezinto eziphezulu, ubunzima bokukhanya, ukuqina okuhle kunye namandla aphezulu e-workpiece, kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi kwinkqubo yokunyathela, ngoko ke inkqubo yotyalo-mali ngobuninzi iphantsi.
-Ukusebenza ngokulula, ubunzulu bezabasebenzi, kulula ukuyiqonda ngoomatshini kunye nokuzenzekelayo.
-Ubume besikhunta obusetyenziswa kwinkqubo yokunyathela ngokubanzi bunzima kakhulu, kwaye umjikelo wophuhliso umde kwaye utyalo-mali luphezulu.
Inkonzo yokunyathela yensimbi ye-Ouzhan ye-OEM eyenziwe ngesinyithi-China sheet yentsimbi yentsimbi yokunyathela iindawo zomenzi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, iphepha lokunyathela iphepha lesinyithi elinentsimbi ephezulu kunye nomgangatho ozinzileyo nothembekileyo unokuqwalaselwa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwamaphepha okunyathela isinyithi. Ukongeza, iimveliso zeshiti yentsimbi yokunyathela ibonelela ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngeshiti yokunyathela kunye nokunyathela iimveliso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Iindawo zokufaka izixhobo zokunyathela iphepha lesinyithi
1.Ukuqina isitampu sokunyathela iinxalenye zemoto: ikakhulu zibandakanya izixhobo ezakhiweyo, izixhobo ezisebenzayo zemoto, iinxalenye zemoto, ukudlulisa iimoto, njl.
2.Ukunyathela izitampu zensimbi zecomputer: ikakhulu zibandakanya izixhobo zokuqhagamshela, izihlanganisi, iinxalenye zebrashi, iiterminal zombane, iindawo ezi-elastic, njl.
3. Sheet metal ukunyathela iinxalenye zezixhobo zekhaya: Ngokukodwa zibandakanya izixhobo zekhaya ezinkulu, ezinje ngombala webhubhu ye-elektroni, kunye nezixhobo ezincinci zekhaya, izinto ezahlukileyo zokwakha kunye nezinto ezisebenzayo.
4. Isakhelo esikhokelayo esikhokelayo sesekethe: ikakhulu kubandakanya isixhobo esikhokelayo esikhokelayo kunye nesakhelo esikhokelayo sokuhamba kwesekethe, njl.
5. Isinyithi esisinyithiweyo sokunyathela isiseko semoto esingundoqo: ikakhulu kubandakanya isigaba esinye senqanaba lesiseko semoto, inqanaba lesibini lesiseko semoto, inqanaba lesibini lesibonda semoto, umazibuthe osisigxina we-motor motor, undoqo weemoto, kunye nokulinda okusisiseko kweplastikhi.
6. Isinyithi esisinyithiweyo isitampu sombane wee-cores zentsimbi: ikakhulu zibandakanya ii-co-transformer cores ezimilise i-E, ii-co-transformer cores-shaped-E, i-co-transformer cores ezimile, kunye nezinye iichips zenguqu zenguqu.
7.Umatshini wokuhambisa isitampu sokunyathela ubushushu: ubukhulu becala zibandakanya amaphiko obushushu obuhamba nomzi mveliso, amaphiko wokufudumeza ubushushu basekhaya, kunye nemiphetho yokuhambisa ubushushu emotweni.
8. Ukunyathela i-sheet yentsimbi kunye namanye amalungu: ikakhulu kubandakanya izixhobo, izixhobo ze-IT, izixhobo ze-acoustic kunye neekhamera, iiofisi zala maxesha, kunye nezixhobo zemihla ngemihla.
Zeziphi izinto ezisetyenziswayo kwiindawo zokunyathela isinyithi
1. Yonke imihla izitena zehardware zentsimbi: izinto eziyimfuneko mihla le ezinje ngeembiza neepani, iisinki, iiketile, nezinto zombane zasendlini ezinje ngoomatshini bokuhlamba iimpahla, izixhobo zokupholisa umoya, iifriji, kunye nezipheki zerayisi;
2. Amashishini okunyathela iintsimbi: izixhobo zeklass chassis, isinyithi sephepha lesinyithi kunye nomatshini wobunjineli bokunyathela iindawo;
3. Ukunyathela iintsimbi zeendawo ezixineneyo: izixhobo, izixhobo, izihlanganisi, njl .;
4. Izixhobo ezizodwa zokunyathela i-aerospace, iinqanawa kunye neenqanawa zomkhosi waselwandle.
Izinto eziluncedo zeOuzhan sheet metal ukunyathela inkonzo
Zonke izinto ezicwangcisiweyo zephepha lokunyathela iimveliso zixhomekeke kuhlolo lomgangatho olungqongqo.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokwenza iphepha lokunyathela isinyithi.
Egqithileyo Sheet iindawo metal ipolishi iinxalenye
Okulandelayo: Icandelo lokunyathela iphepha lesinyithi
Inkqubo yealuminium alloy kunye nenkqubo yefestile ...
6016 aluminium ingxubevange unyango ubushushu CNC machinin ...